Ma cookie-ka Google Cooking ayaa burburaya? | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 18, 2008 Isniin, Disembar 22, 2008 Douglas Karr
Waxaan hayaa aragtidan inaan waxba la qiyaasi karin. Ganacsiyada guuleysta ayaa inta badan ka dheereeya awooddooda ay ku maareeyaan kobaca, tikniyoolajiyadaha si weyn ugu shaqeeya heer yar ayaa dhif ah in ay qabtaan shaqada baaxad weyn… xitaa shaqaalaha badanaa waxaa laga dalacsiiyaa awoodooda.
Google waxay arkeen koboc aan horay loo arag tobankii sano ee la soo dhaafay. In muddo ah ayaan u qabannay iftiinka oo waxaan u adeegsannay qiyaasta guusha. Shalay, waxaan hoos udhignay baarka inkasta oo, aan bilawnay inaan baarno banaanka darbiyadeena oo aan si adag u eegno Google marka wax aan caadi aheyn ay dhacaan.
Google Dhawaan Fashilmay:
Maanta waxaan faallo ka bixin lahaa barta uu ku leeyahay saaxiibkay Erik Blogger (Nin ayaa ku weeraray saaxiibkiis cheeseburger), Laakiin waan heli kari waayey bogga faallooyinka xitaa xamuulka.
Dhowr maalmood, kama diiwaan gelin karno wax bogag ah Raadinta Raadinta Google. Boggu wuxuu sii waday inuu na siiyo khalad xaqiijin ah oo aan dib ugu soo celinayno lambarrada xaaladda ee khaldan 404 (bogagga lama helin). Dhab ahaantii, our madal shirkadeed ayaa soo celinaysay lambarradii ku habboonaa. Maalin ama wixii ka dambeeya, dhammaantood si fiican ayey u fiicnaadeen mar kale!
Google Reader had iyo jeer u muuqataa inay tahay furid aniga, aniga oo i tusaya quudin aan horey u aqriyay and marar badan iyo in ka badan.
Waxaan hirgelinay a Google Analytics Koontada macmiilka toddobaadkan ee muujisay in goobta lagu xaqiijiyay hal bog, oo aan lagu hubin bog kale, isla markaana aan qaadanayn wax stats ah. Waxay ahayd inaan tirtirno koontada oo aan dib u bilowno.
Cusboonaysiinta: 12/21 - Tan iyo markii aan quudintayda u beddelay Google, ma gali karo oo ma heli karo tirakoobyadayda iyo cinwaankeyga duugga ah weligood ma cusbooneysiin.
Waxa kaliya ee Google u muuqda inuusan waligiis ku fashilmin waa soo bandhigida xayeysiis khuseeya. Hmmmm.
Tags: sicirka-ku-gaadhiga wareegamobilada sdkjeexjeexSliderstarbucksStarbucks app mobileHada U Daawasho Madadaalo
19, 2008 at 6: 57 PM
Waan ku faraxsanahay in la ogaado in Google uusan wali ku guul darreysan inuu na soo gaarsiiyo xayeysiis. Waan fahmi karay qaar ka mid ah adeegyada bilaashka ah inay mar mar hoos u dhacaan, laakiin waxa iga walwalsan waa marka barnaamijyadooda "fasal ganacsi" (boostada martigelisay, barnaamijyada, iwm) ay bilaabaan inay hoos u dhacaan saacado ama maalmo markiiba. Iyadoo aan la xusin sababta iyo goorta ay soo laaban doonaan. Taasi waa waqti lumis, taas oo ganacsigeyga micnaheedu yahay lacag lumay. Lacagta aad u badan ee aan u maleynayo inaan keydsanayo aniga oo aan wadin alaabtayda.
22, 2008 at 11: 56 AM
Waxaan la kulmay arrimo qaar ka mid ah blogger sidoo kale. Ma aha in la xuso, Alerts-kayga Google ayaa sii socda. Waan ku faraxsanahay inaan ogaado inaanan ahayn kan keliya ee arkaa tan!